Marko 10 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
10 Ukusuka apho waya kwimida yelakwaYuda naphesheya kweYordan, yaye kwakhona izihlwele zabuthelana kuye, kwaye njengoko wayeqhele ukwenza waqhubeka ezifundisa kwakhona.+ 2 Bafika abaFarisi, baza bemvavanya, bambuza enoba kwakusemthethweni kusini na ngendoda ukuqhawula umtshato nomfazi.+ 3 Wabaphendula wathi: “Waniyalela ntoni uMoses?” 4 Bathi: “UMoses wakuvumela ukubhalwa kwesiqinisekiso sokumndulula nokuqhawula umtshato naye.”+ 5 Kodwa uYesu wathi kubo: “Ngenxa yobuntliziyo-lukhuni benu+ wanibhalela lo myalelo. 6 Noko ke, ukususela ekuqaleni kwendalo ‘Wabenza baba yindoda nebhinqa.+ 7 Ngenxa yoku indoda iya kumshiya uyise nonina, 8 yaye aba babini baya kuba nyama-nye’;+ ukuze bangabi saba babini, kodwa babe nyama-nye. 9 Ngoko ke oko uThixo akubophelele ngedyokhwe ndawonye makungahlukaniswa mntu.”+ 10 Xa besendlwini+ kwakhona abafundi bakhe bambuza ngokuphathelele oku. 11 Yaye wathi kubo: “Nabani na oqhawula umtshato nomfazi wakhe aze atshate nomnye uyakrexeza+ ngokunxamnye naye, 12 yaye ukuba umfazi, emva kokuqhawula umtshato nendoda yakhe, utshata nenye, uyakrexeza.”+ 13 Abantu bazisa kuye abantwana abaselula ukuze abachukumise; kodwa abafundi babakhalimela.+ 14 Akukubona oku uYesu wacaphuka waza wathi kubo: “Bayekeni abantwana abaselula beze kum; ningabaleli, kuba ubukumkani bukaThixo bobabo banjalo.+ 15 Inene ndithi kuni, Nabani na ongabamkeliyo ubukumkani bukaThixo njengomntwana oselula akasayi kuze angene kubo.”+ 16 Yaye wabawola aba bantwana waza wabasikelela, ebabeka izandla.+ 17 Yaye njengoko wayephuma ehamba, umntu othile wabaleka waza wawa ngamadolo phambi kwakhe yaye wambuza umbuzo esithi: “Mfundisi Olungileyo, ndenze ntoni na ukuze ndibudle ilifa ubomi obungunaphakade?”+ 18 UYesu wathi kuye: “Kutheni undibiza ngokuthi olungileyo?+ Akukho bani ulungileyo, ngaphandle komnye, uThixo.+ 19 Uyayazi imiyalelo, ‘Uze ungabulali,+ Uze ungakrexezi,+ Uze ungebi,+ Uze ungangqini ubuxoki,+ Uze ungaqhathi,+ Beka uyihlo nonyoko.’”+ 20 Lo mntu wathi kuye: “Mfundisi, zonke ezi zinto ndiye ndazigcina ukususela ebutsheni bam.” 21 UYesu wamjonga yaye waziva emthanda waza wathi kuye: “Kukho nto inye uyiphosayo: Hamba, uye kuthengisa izinto onazo, unike amahlwempu, yaye uya kuba nobuncwane ezulwini, uze ube ngumlandeli wam.”+ 22 Kodwa wathi khunubembe lelo lizwi waza wahamba ebuhlungu, kuba wayenezinto ezininzi.+ 23 Emva kokusingasinga uYesu wathi kubafundi bakhe: “Hayi indlela ekuya kuba nzima ngayo ngabo banemali+ ukungena ebukumkanini bukaThixo!”+ 24 Kodwa abafundi basuka bamangaliswa+ ngamazwi akhe. Kwakhona uYesu wasabela ngokuthi kubo: “Bantwana, hayi indlela ekunzima ngayo ukungena ebukumkanini bukaThixo! 25 Kulula ngakumbi ngenkamela ukuphumela kwintunja yenaliti kunokuba isityebi singene ebukumkanini bukaThixo.”+ 26 Bathi khamnqa kwanangakumbi yaye bathi kuye: “Ngubani na ke onokusindiswa?”+ 27 Ekhangele ngqo kubo uYesu wathi: “Kubantu akunakwenzeka, kodwa akunjalo kuThixo, kuba zonke izinto zinokwenzeka kuThixo.”+ 28 Waza uPetros wathi kuye: “Khangela! Sishiye zonke izinto sakulandela.”+ 29 UYesu wathi: “Inene ndithi kuni, Akukho bani ushiye indlu okanye abantakwabo okanye oodade wabo okanye unina okanye uyise okanye abantwana okanye amasimi ngenxa yam nangenxa yeendaba ezilungileyo+ 30 ongayi kufumana ngokuphindwe kalikhulu+ ngoku kwesi sihlandlo sexesha, izindlu nabantakwabo noodade wabo noonina nabantwana namasimi, kunye neentshutshiso,+ nakwinkqubo yezinto ezayo ubomi obungunaphakade. 31 Noko ke, abaninzi abangabokuqala baya kuba ngabokugqibela, baze abokugqibela babe ngabokuqala.”+ 32 Ke kaloku babenyuka ngendlela besiya eYerusalem, yaye uYesu wayehamba phambi kwabo, kwaye bathi manga; kodwa bamlandela besoyika. Kwakhona wathabathela bucala abalishumi elinesibini waza waqala ukubaxelela ezi zinto zazimiselwe ukumhlela:+ 33 “Niyabona, siyenyuka siya eYerusalem, yaye uNyana womntu uya kunikelwa kubabingeleli abaziintloko nakubabhali, bamgwebele isohlwayo sokufa baze bamnikele kubantu beentlanga,+ 34 yaye baya kuhlekisa ngaye, bamtshicele, bamtyakatye baze bambulale, kodwa kwiintsuku ezintathu kamva uya kuvuka.”+ 35 UYakobi noYohane, oonyana ababini bakaZebhedi,+ baya kuye baza bathi kuye: “Mfundisi, sifuna ukuba usenzele nakuphi na esikucelayo kuwe.”+ 36 Wathi kubo: “Nifuna ndinenzele ntoni na?” 37 Bathi kuye: “Sinike ukuba sihlale, omnye ngasekunene kwakho nomnye ngasekhohlo kwakho, ebuqaqawulini bakho.”+ 38 Kodwa uYesu wathi kubo: “Anikwazi oko nikucelayo. Niyakwazi na ukusela indebe endiyiselayo, okanye ukubhaptizwa ngobhaptizo endibhaptizwa ngalo?”+ 39 Bathi kuye: “Siyakwazi.” Ngako oko uYesu wathi kubo: “Indebe endiyiselayo niya kuyisela, nobhaptizo endibhaptizwa ngalo niya kubhaptizwa ngalo.+ 40 Noko ke, kona ukuhlala ngasekunene kwam okanye ngasekhohlo kwam asikokwam ukunikisa ngako,+ kodwa kokwabo kulungiselelwe bona.” 41 Ngoko, bakukuva oku abanye abalishumi, bakucaphukela oko kwenziwa nguYakobi noYohane.+ 42 Kodwa uYesu, emva kokubabizela kuye, wathi kubo: “Niyazi ukuba abo babonakala belawula iintlanga baba ziinkosi phezu kwazo nabo bakhulu kuzo basebenzisa igunya phezu kwazo.+ 43 Makungabi njalo phakathi kwenu; kodwa nabani na ofuna ukuba mkhulu phakathi kwenu makabe ngumlungiseleli wenu,+ 44 yaye nabani na ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwenu makabe likhoboka lenu nonke.+ 45 Kuba kwanoNyana womntu weza, kungekhona ukuze alungiselelwe,+ kodwa ukuze alungiselele nokuze anikele ngomphefumlo wakhe ube yintlawulelo+ ngenxa yabaninzi.”+ 46 Yaye bafika eYeriko. Kodwa njengoko yena nabafundi bakhe nesihlwele esikhulu babephuma eYeriko, uBhartimeyu (unyana kaTimeyu), umngqibi oyimfama, wayehleli ecaleni kwendlela.+ 47 Wathi akuva ukuba yayinguYesu umNazarete, wakhwaza wathi: “Yesu, Nyana kaDavide,+ yiba nenceba kum!”+ 48 Ngako oko abaninzi bamxelela kabukhali ukuba athi cwaka; kodwa waqhubeka ekhwaza kakhulu ngakumbi esithi: “Nyana kaDavide, yiba nenceba kum!”+ 49 Ngoko uYesu wema waza wathi: “Mbizeni.” Yaye bambiza umntu oyimfama, besithi kuye: “Yomelela, sukuma, uyakubiza.”+ 50 Esithi xibilili isambatho sakhe sangaphezulu, waxhuma wema ngeenyawo waza waya kuYesu. 51 Yaye ekumphenduleni uYesu wathi: “Ufuna ukuba ndikwenzele ntoni na?”+ Umntu oyimfama wathi kuye: “Rabhoni, ndenze ndiphinde ndibone.”+ 52 Yaye uYesu wathi kuye: “Hamba, ukholo lwakho lukuphilisile.”+ Ngoko nangoko wabuya wabona,+ waza wamlandela.+